Ndị ahụ gụnyere ode akwụkwọ izugbe steeti ahụ n'ọchịchị ya nke mbụ, bụ ọkammụta Sobe Chukwulobelụ, bụkwa onye a kpọlitere ka o ka jide ya bụ ọkwa; ode akwụkwọ ukwu nyere gọvanọ n'ọchịchị ya nke mbụ, bụ Sa Willie Nwokoye, bụkwa onye ọ sị ya ka jidekwa ya bụ ọkwa; Maazị Primus Ọdịlị, bụ onye nọchizịrị anya Ọkammụta Joe Asike dịka onyeisi ndị ọrụ nyere gọvanọ (Chief of Staff); tinyere Maazị James Ezeh, bụ onye a kpọlitezịrị dịka ode akwụkwọ mgbasa ọzi nyere gọvanọ.
Ka ọ na-edu ha n'iyi ọrụ na mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ na ngalaba isi ọchịchị nke obi gọọmenti steeti ahụ, gọvanọ Obianọ mere ka a mara na ndị ahụ sóró ya wee rụọ ọrụ n'ọchịchị ya nke mbụ tozuchara òkè, tinyekwuoro Maazị Primus Ọdịlị, bụ onye rụrụ ọrụ dịka ode akwụkwọ otu achụm nta nkwado ya oge ọ zọrọ ọchịchị, bụkwa onye o kwuru na o tozukwara oke maka ọkwa ọhụrụ ahụ o nyere ya.
Obianọ chetaara ha ezigbo mkpa ọ dị, bụ ịdị uchu n'ọrụ ha, iji hụ na ha mere ntụnye pụrụ iche maka ọdịmma nke ọchịchị ya na steeti Anambra n'izugbe. O mere ka ha mara na ha nwere ọtụtụ ọrụ chere ha n'ihu ma dụzie ha ka ha were ezi amamihe ahụ a hụtara n'ime ha, nghọta na ezi ọnụnụ ọkụ n'obi wee rụọ ọrụ ha dịka ndị kwesiri ntụkwasị obi ha bụ.
N'okwu ya n'aha ndị ahụ a kpọlitere n'ọkwa; ode akwụkwọ izugbe steeti ahụ bụ Ọkammụta Sobe Chukwulobelụ kelere gọvanọ maka ịhụta ha dịka ndị tozuru oke wee nye ha ọkwa ahụ dị oke elu, ma kwekwa ya nkwa na ha ga-arụsi ọrụ ike karịa ka ha rụrụ na nke gara aga; na ya agaghị agharịpụkwa ya.
Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ngwa ngwa e duchara ha n'iyi ọrụ, Maazị James Ezeh gosipụtara obi añụrị na afọ ojuju ya banyere ọkwa ọhụrụ ahụ, ma kọwaa na ahọ anọ gara aga ọ rụrụ ọrụ dịka nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ na mgbasa ozi kwadoro ya nnọọ nke ọma maka ya bụ ọrụ ọhụụ e nyere ya, ọ bụnadị dịka ọ sị na o nwere ezi olile anya na ọchịchị agba nke abụọ a ga-abụ nnọọ sọ mma.
N'akụkọ dịkwa ka ibe ya, gọvanọ Obianọ nọkwara na mmalite izu ụka a wee zigara ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra aha ndị ọ chọrọ ịkpọlite dịka ndị kọmissiọna ministrịrị dịgasị iche iche na steeti ahụ.
Ndị ahụ a kpọlitere gụnyere Dọkịnta Uju Nwọgụ, Ọkammụta Kate Azụka Omenụgha, Maazị Ifeatu Onejeme, Maazị Maxell Ifejiọfọ, Maazị Mark Okoye, Maazị Obi Nwankwọ, Dọkịnta Joe Akabụike, Maazị Nnamdị Ọnụkwuba, Dọkịnta Theresa Obiekezie, Maazị Micheal Okonkwọ, Dọkịta Christian Madụbuko, Maazị Uche Okafọ, Maazị Bonaventure Enemalị, Fidon Adinuba, Maazị Emeka Ezenwanne, Ndidi Mezue, nakwa Sali Mbanefo.